Ihe Ọjọọ na Ahụhụ Juru Ebe Niile
ISIOKWU TETA! A Ihe Ọjọọ Juru Ebe Niile
ISIOKWU TETA! A Gịnị Mere Ihe Ọjọọ Ji Eme Ndị Ezigbo Mmadụ?
ISIOKWU TETA! A Otú Chineke Ga-esi Eme Ka Ihe Ọjọọ Kwụsị
BAỊBỤL NA-AGBANWE NDỤ NDỊ MMADỤ M Na-eji Égbè M Aga Ebe Ọ Bụla M Na-aga
Ị̀ Ga-ahụli Chineke Onye Mmadụ Na-enweghị Ike Ịhụ Anya?
GỤỌ NKE Afrikaans Albanian Amharic Arabic Armenian Aymara Azerbaijani Azerbaijani (Cyrillic) Bengali Bulgarian Catalan Cebuano Chichewa Chinese Mandarin (Simplified) Chinese Mandarin (Traditional) Chitonga Chitumbuka Cibemba Croatian Czech Dangme Danish Dutch Efik English Estonian Ewe Finnish French Ga Georgian German Greek Guarani Gujarati Haitian Creole Hebrew Hiligaynon Hindi Hungarian Igbo Iloko Indonesian Italian Japanese Kannada Kazakh Kikaonde Kikuyu Kiluba Kimbundu Kinyarwanda Kirghiz Kirundi Kisonge Kongo Korean Krio Lingala Lithuanian Luganda Luo Macedonian Malagasy Malay Malayalam Maltese Marathi Maya Mazatec (Huautla) Moore Nepali Norwegian Nyaneka Nzema Ossetian Otetela Pangasinan Papiamento (Aruba) Papiamento (Curaçao) Persian Polish Portuguese Quechua (Bolivia) Romanian Russian Sango Sepedi Serbian Serbian (Roman) Sesotho (Lesotho) Setswana Shona Silozi Sinhala Slovak Slovenian Spanish Sranantongo Swahili Swahili (Congo) Swedish Tagalog Tahitian Tamil Tatar Telugu Thai Tigrinya Tshiluba Tsonga Turkish Twi Ukrainian Umbundu Urdu Vietnamese Wayuunaiki Xhosa Yoruba Zande Zulu
Ụlọ Nche | Julaị 2014
ISIOKWU ỤLỌ NCHE A | GỊNỊ MERE IHE ỌJỌỌ JI EME NDỊ EZIGBO MMADỤ?
Ihe Ọjọọ Juru Ebe Niile
E nwere otu nwaanyị dị afọ iri atọ na ise. Aha ya bụ Smita. * O bi n’obodo Daka, nke dị na Bangledesh. Ọhaneze ma na ọ hụrụ ndị mmadụ n’anya, bụrụkwa nwaanyị obiọma. Ha makwa na ọ na-agba mbọ n’ụlọ di ya nakwa na obi na-adị ya ụtọ mgbe niile. Ihe ọzọ e ji mara ya bụ na ọ na-akụziri ndị mmadụ gbasara Chineke. Obi gbawara ndị ezinụlọ Smita na ndị enyi ya mgbe o butere ọrịa na mberede ma nwụọ n’ihe na-erughị otu izu.
E nwere otu nwoke a na-akpọ James. Ya na nwunye ya agafetụla afọ iri atọ. Ọ bụ àgwà ọma ndị ahụ e ji mara Smita ka e jikwa mara ya na nwunye ya. Ma, mgbe di na nwunye a gara ileta ndị enyi ha bi n’ebe dị nso n’Oké Osimiri Pasifik, n’Amerịka, ha alọtakwaghị n’ụlọ ha dị na Niu Yọk. N’oge ahụ ha gara ebe ahụ, ha nwere ihe mberede okporo ụzọ. Ihe mberede ahụ takwara isi ha. Ọnwụ ha wutere ndị hụrụ ha n’anya na ndị ha na ha na-arụkọ ọrụ.
Ebe ọ bụla i lere anya n’ụwa, ị ga-ahụ na ihe ọjọọ na ahụhụ juru eju bara abara. Agha ndị mmadụ na-alụ na-egbu ma ndị gara agha ma ndị na-agaghị agha. Ndị mmadụ na-arụsa ndị ọ na-enweghị ihe ha mere arụrụala, na-emesokwa ha ihe ike. Ọrịa na ihe mberede na-emenyụ ndị mmadụ anya, ma ndị ukwu ma ndị nta, ma ụmụaka ma ndị toro eto. Ọdachị ndị na-emere onwe ha na-egbuchapụ ndị bi n’ebe dị iche iche n’asọghi onye ọ bụla anya. Ịkpọasị na mmegbu juru ebe niile. O nwekwara ike ịbụ na otu n’ime ihe ọjọọ ndị a emetụla gị.
Nsogbu ndị a emeela ka ndị mmadụ na-ajụ, sị:
Ọ̀ bụ Chineke na-akpata ihe ọjọọ ndị ahụ?
Ọ̀ bụ ndị mmadụ na-akpata ọdachi ndị na-emenụ, ka hà na-emere onwe ha?
Ọ̀ bụ ihe mmadụ metara n’ụwa ya mbụ mere o ji ata ahụhụ?
Ọ bụrụ na Chineke onye pụrụ ime ihe niile dị adị, gịnị mere o ji kwe ka ihe ọjọọ na-eme ndị ezigbo mmadụ?
Ò nwere mgbe ihe ọjọọ na ahụhụ na-agaghịzi adị n’ụwa?
Ọ bụrụ na anyị chọrọ ịmata azịza ajụjụ ndị a, anyị ga-ebugodị ụzọ mata azịza ajụjụ abụọ dị mkpa. Nke mbụ bụ: Gịnị mere ihe ọjọọ ji malite ime? Nke abụọ bụ: Gịnị ka Chineke ga-eme ihe ọjọọ ndị na-emenụ?
Julaị 2014 | Gịnị Mere Ihe Ọjọọ Ji Eme Ndị Ezigbo Mmadụ?
ỤLỌ NCHE Julaị 2014 | Gịnị Mere Ihe Ọjọọ Ji Eme Ndị Ezigbo Mmadụ?